Niala tsiny ilay Youtuber Shinoa Tia tanindrazana rehefa avy nitsikera momba ny propagandy sy ny kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Tsy mbola nozaraina ny tanin'ny ala. Feno kolikoly tokoa izany!
Voadika ny 07 Avrily 2021 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, English, Português, English
Mpisera Youtube tia tanindrazana, Zheng Guocheng. Pikantsary avy amin'ny YouTube.
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tamin'ny teny shinoa tao amin'ny CitizenNews any Hong Kong tamin'ny 19 martsa 2021. Navoaka ato amin'ny Global Voices ity fandikan-teny ity noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Raha tena mino isika fa ratsy i Etazonia, dia tsy maintsy manao fikarohana lalina manomboka amin'ny manampahefana foibe ka hatramin'ny manam-pahefana eo an-toerana isika ary hijery hoe iza no nandefa ny zanany tany Etazonia. Tokony ho fahavalon'ny vahoaka izy ireo.
Matetika mivoaka ao amin'ny media sosialy Sinoa ity karazana fanehoan-kevitra ity, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia avy amin'ilay YouTuber Tia Tanindrazana malaza Zheng Guocheng nandritra ny fandefasana mivantana naharitra adiny efatra tamin'ny 11 martsa lasa teo.
Ny ampitso maraina, nofafan'i Zheng ilay horonantsary ary nampakatra fialantsiny iray hafa noho ny fanehoan-kevitra nataony izy, nilaza izy fa mamo ny alina talohan'io. Na izany aza, maro ireo mpiserasera namaly fa nankafizin'izy ireo ny fitsikerana nataony izay hitan'izy ireo fa mitsotra ny marina.
YouTuber nandritra ny telo taona i Zheng. Manana mpamandrika maherin'ny 100.000, malaza amin'ny votoatiny mpomba an'i Shina sy ny fitsikerana ireo fahavalony ny fantsony Chinese youth Zheng Guocheng. Noho izany antony izany, matetika i Zheng faritana ho “50 cents”, vazivazy Sinoa ho an'ireo mpaneho hevitra an-tserasera karamain'ny governemanta.
Nahagaga ny mpihaino azy ny fahatezerany naharitra adiny efatra tamin'ny 11 martsa. Nandritra ny fandefasana mivantana nataony, dia nitaraina momba ny Antoko Komonista Shinoa sy ny manampahefam-panjakana izy – manomboka amin'ny Ala sy ny Kirihitra ka hatrany amin'ny manampahefana Propagandy – ary koa ireo mpaneho hevitra antserasera tia tanindrazana namany.
Nambarany tamin'ny mpihaino azy koa fa ny fitiavan-tanindrazana dia fampisehoana mba hivelomana ka tamin'ny volana lasa teo fotsiny dia nampidi-bola 7000 USD izy.
Nitarika fitsidihana vao haingana tao amin'ny Fitantanana ny Ala sy ny Kirihitra ao amin'ny faritanin'i Jilin ny hatezeran'i Zheng . Tsy nahavita nametraka politika fizarana tany ny manampahefana ao an-toerana ao ary mbola tsy voavaha nandritra ny 10 taona mahery ny fifanolanana.
Nilaza i Zheng fa ny kolikoly no nahatonga ny olana ary nanapa-kevitra izy ny hilaza ny tantara “ho an'ny zon'ny mponina”:
Ao amin'ny vohitra misy anay, dia mbola tsy nozaraina ny tanin'ny ala. Feno kolikoly tokoa! Manana antontan-taratasy ny Fitantanana Nasionaly ny ala sy ny kirihitra (bozaka) izay milaza fa afaka manan-jo hanana sombin-tany ny tokantrano rehetra. Saingy tsy nisy nisy na inona na inona tao.
Rehefa mangalatra 10.000 ny olon-tsotra dia migadra telo taona. Kolikoly? Na dia mahatratra hatramin'ny miliara aza ny vola, dia telo taona monja ny sazy. Rariny ve izany? Ratsy lavitra noho ny mangalatra ny kolikoly. Raha telo taona ny sazy mangalatra 10.000, dia tokony hamono ny ain'ny fianakaviana lehibe ny miliara. Amiko, ny kolikoly rehetra dia tokony hahazo sazy mandrapahafaty na ohatrinona na ohatrinona ilay vola.
Notsiahivin'i Zheng ny fanabeazana fitiavan-tanindrazana voarainy nandritra ny fianarana lisea, rehefa nilaza izy, fa zatra nilaza ny mpampianatra azy fa “ho levona i Etazonia” ka nanentana ny mpianatra tsy handeha ho any Etazonia, fa ankehitriny “mandefa ny zanany any Etazonia ny ankamaroan'ny manampahefana”
Rehefa nanontaniana ny antony tsy nanolorany ny fanangonan-tsonia ho an'ny Fitantanana ny Fitarainana sy ny Sosokevi-bahoaka, dia nilaza i Zheng:
Raha nitsidika ny biraon'ny fitakiana (fanangonan-tsonia) any amin'ny faritany aho, dia tsy mba ho lasa mpiasam-panjakana mihitsy ny zanak'olo-mpianadahy (…) Azonao jerena eto ny olana, inona ny fotokevitr'ireo rafi-pitakiana? Raha tsy misy ilana azy ny rafitra, maninona no tsy foananao izany? Raha misy izany, maninona no saziana ny fianakavian'ireo mpanao fitakiana rehefa mametraka fitakiana izy ireo? Milaza hatrany ianao fa mahatalanjona sy matanjaka i Shina, inona no ilàna ny matanjaka?
Niresaka tranga iray tao Heilongjiang i Zheng, nilaza fa “ratsy kokoa noho ny fahafatesana ny làlan'ny fanangonan-tsonia satria hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny fianakavianao manontolo izany.”
Notsikerainy ihany koa ny sivana sy ny fampielezana hevitra ofisialy noho ny “tsy firaharahiany ny hirifirin'ny olona”. Rehefa nanontaniana momba ny “fomba fijeriny ny mahery fihetsika [eny an-tendrony]” , dia hoy izy hoe:
Inona no mahatonga ahy ho eny an-tendrony? Tsy vitako akory ny mamaha ny olana amin'ny tena fiainako ary omenao tsiny aho fa eny an-tendrony? Mba mahalalà menatra!
Tao amin'ny horonantsariny fialantsiny, nilaza i Zheng fa mamo izy satria nandalo olana ara-pianakaviana ary maty vao haingana ny namana taloha iray. Nampanantena izy fa hifady toaka amin'ny ho avy.
Taorian'izany dia niverina tamin'ny votoatiny mahazatra i Zheng, toy ny fitsikerana an'i Etazonia sy ny fanesoana an'i Taiwan.
Raha nitatitra ny lahatsariny voalohany ny haino aman-jery shinoa, ary nanjary nalaza be ny sarimihetsika samihafa momba izany, dia nametraka fialantsiny hafa tamin'ny 17 martsa i Zheng tamin'ny filazany fa diso ny fandraisana ny fanehoan-keviny voalohany.
Na eo aza izany, maro ireo mpiserasera nametraka ny heviny nilaza fa tsy mila miala tsiny izy satria nilaza ny marina fotsiny. Ny sasany nangataka taminy hisotro toaka alohan'ny handefasana lahatsary satria nahafinaritra azy ireo ny nijery azy miresaka rehefa mamo.
Ity ambany ity ny rakitra Youtube fiandry tamin'ny lahateny maharitra adiny efatra tamin'ny 11 martsa: